Tsy misy takona izay tsy hiseho | NewsMada
Asakasaky ny mpanao ratsy e ! Hoy mantsy ny fitenenana manao hoe : « tsy misy miafina izay tsy hitranga, na takona izay tsy hiseho». Voasambotry ny mpitandro filaminana ihany, na nisitrika sy niafina, nandritra ny iray volana teo ho eo aza izay, ilay vehivavy nalaza ratsy, voarohirohy amin’ireny « Raharaha fakana an-keriny » zaza mianadahy, tany Toamasina, ireny.
Nahabe resaka tokoa ny momba an-dramatoa ity, satria na ireny jiolahy nalaza ireny aza, tsy nahavita ny zava-bitany, raha ny voalazan’ny votoatin’ny fanenjehana azy. Traingo ihany anefa izao ny anao… vavy, ka heverina marimarina fa tsy maintsy hijinja izay nafafiny hatramin’izay izy io. Raha tsy hoe angaha ho very an-javony sy ho faty momoka indray ny tohin’ny raharaha.
Fa tsy izay ihany. Mampiseho ny heriny, ny fahaizany, ny volany sy ny fahefany aloha izao ireo voalaza fa « mafia », mpanondrana ny harem-pirenena (andramena, volamena,…). Voalaza ombieny ombieny ny fisian’ny olona ambony ao amin’ny fitondrana, miseho ho tsimatimanota, tafiditra ao anatin’itony raharaha maloto eto amin’ny firenena itony.
Mikatso am-pandehanana hatrany ny raharaham-pamotorana, na manao izay ho afany amin’ny fanadihadiana sy famotorana aza ny tompon’andraikitra sasany. Dia hoy ny tononkiran’i Ludger Andrianjaka izay : « Ny zavatra atomboka rehetra, dia hifarana hatreo amin’ny fetra ». Hainareo ny tohiny e !